Kheyre oo caqabado ka wajahaya awood qeybsiga beeelaha Hawiye ee wasiirada - Caasimada Online
Home Maqaalo Kheyre oo caqabado ka wajahaya awood qeybsiga beeelaha Hawiye ee wasiirada
Kheyre oo caqabado ka wajahaya awood qeybsiga beeelaha Hawiye ee wasiirada
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo ayaa magacaabay Ra’isul wasaaraha cusub Xasan Cali Kheyre oo uu ku soo doortey inuu la shaqeyn karo.
Madaxweynaha ayaa xilka uu u doortay Xasan Cali Kheyre ee Ra’isul wasaare, waxaa markii hore ku dagaalamayey beelaha kala duwan ee Hawiye oo ay ugu horeeyeen Habargidir iyo Abgaal. Ra’iisul waaraha cusub ayaa wuxuu ka yimid beesha Murusade ee Hawiye.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa qaatay go’aan geesinimo leh oo uu kusoo xushay shakhsiga uu ku aamini karo xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, waxaana xilkaasi nasiib u yeeshay in loo magacaabo Xasan Cali Kheyre oo ah nin dhalinyaro ah.
Dhibaatada ugu weyn ee Raysal wasaarahan la kulmi karo waa haday ansixiyaan golaha Baarlamaanku ayaa noqon doonta sida uu xukumada u soo dhisi doono.
Waxaa ii muuqata in khalad weyn ka imaan doonto sida beelaha u heli jireen miisaanka awood qeybsiga kuraasta golaha wasiirasa. Arrinkaa waa dhibaatada ugu wayn ee uu la kumi doono Raysal wasaaraha la magacaabay Xasan Cali Khayre.
Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa ah nin dhalinyaro ah oo aan siyaasadda horey ugu dhax jirin, waxa uuna sanado badan madax ka ahaa Hay’ada NRC, waxa uu sidoo kale ka mid ahaa Madaxda Shirkada Soma oil and Gas, waana nin khibrad iyo aqoon badan leh.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu Golaha Baarlamaanka Federaalka ka dalbaday in ay meel-mariyaan Ra’iisul wasaare Kheyre, si uu u soo dhiso Xukuumad Tayo leh oo bilowda waxa ay shacabku ka sugayaan.
Dhinaca kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa Ra’isul Wasaaraha cusub u jeediyay in muddo 15 cisho gudahood uu kusoo dhiso xukuumaddiisa.